Tuesday January 14, 2020 - 17:41:59 in Wararka by Mogadishu Times
Golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa maanta ansixiyay Hindise-sharciyeedka Wax-ka beddelka Xeerka Warbaahinta. wax ka bedelka Xeerka saxaafada Soomaaliya ayaa soo maray marxalado kala duwan, iyadoo lagu guulaystay in laga saaro qodobo loo arkayay inay hal
Golaha Aqalka Sare ee BFS ayaa maanta ansixiyay Hindise-sharciyeedka Wax-ka beddelka Xeerka Warbaahinta. wax ka bedelka Xeerka saxaafada Soomaaliya ayaa soo maray marxalado kala duwan, iyadoo lagu guulaystay in laga saaro qodobo loo arkayay inay halis ku yihiin jiritaanka saxaafad madax bannaan oo dhex dhexaad ah. Bishii Julay, ee sannadkii hore ayaa golaha shacabku meel mariyay xeerkaan oo hadda dhaqan galkiisu ka harsan tahay marka uu madaxweynuhu saxiixo.
Golaha Aqalka sare aya ansixiyey Hindise-sharciyeedkani. Waxaa Ogaaladay 23 Senatar,Waxaa diiday 3 Senatar, Waxaa ka aamusay 1 Senatar.